Rasaasa News – Beesha Maalin-guur, oo Soo Saartay Baaq Taageero Heshiisyada Nabada ee Dawlada iyo ONLF
on September 25, 2010 1:18 am
Jigjiga, [Sept 24, 2010] Beesha Maalinguur oo noqotay beeshii ugu dambaysay beelaha Ogadeen ee soo dhawaysa geedi socodka nabada ee ka hirgalay degaanka Somalida.
Heshiiska ay qaateen Jabhadihii hore ula dagaalami jiray dawlada, ayaa waxaa si xoog leh u soo dhaweeyey dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa heshiisyadaas nabada ka soo horjeedsaday Jwxo-shiil iyo kuwa wax ma garata ah oo isaga daba socda. Waxay sheegeen in kooxdani ayna waligood nabad doonaynin, dagaalna ay diyaar u yihiin oo ayna dan iyo aabo midna ka lahayn dad iyo duunyo degaanka Somalida Ogadeeniya.
Kooxdaas waxaa u jawaabay beelaha ay ka kooban tahay beesha Ogadeen, oo awal hore dhibaato badan loogu gaystay taageerida Jabhadaha, baneeyeyna kaalinkii nololeed ee ay ku lahaayeen degaanka.
Waxaa todobaadkii hore Baaqnabadeed soo saaray beesha Maakiihiil, oo sheegtay in ay taageerayso nabada ka socota degaanka Somalida.
Baaqan ugu dambeeya waxaa soo saaray beesha Maalinguur oo ah laf ka mid ah lafaha reer Ugaas Xirsi.
Baaqiina sidan ayuu u qoraa;
Isbadalka wacyiga- cusub iyo la-jaan qaadka nabada ka socota degaanka Somalidu waa mid lama huraan ah. Colaad iyo dhibaato horay bay u daashatay degaankeena, isbadalada cusub ee horta leh waa yididiilo nabad iyo horumar. Waxaa kale oo aan la iska indho tiri karin horumarka ay gaadheen degaanada nabada ah.
Hadaba beesha Maalin-guur ayaa iskood u qabsaday shir balaadhan oo ay ka soo qaybgaleen Madaxda Beesha oo uu ka mid ahaa Xabiib Muxumad Yuusuf, Odayaal, Aqoon-yahano,Qurbo-joogta Beesha, Culumaa-udiin iyo xubno kamida Garabka Nabada-qaatay.
Hadaba dhamaantood oo kasoo jeeda Beesha Maalin-guur ee Gobolada Fiiq iyo Dhagax-buur ayaa ku shiray magaalada jigjiga, shirku wuxuu war bixino aad u qoto- dheer ka dhagaystay wakiiladii, odayaasha, qurbo-joogta, nabad-doonka, iyo aqoon-yahankaba.
Kadib markii si wayn loo falan-qeeyay xogta dhabta ah ee ku saabsan dhinaca nabad-galyada, dhinaca siyaasada, horumarka bulshada iyo arimaha dhaqan- dhaqaale ee guud ahaan deegaanka soomaalida iyo gaar ahaan deegaanka beesha.
Sidoo kale markii si cad loo qeexay dhibaatooyinka iyo hagar-daamada uu nabadiidku ku hayo gaar- ahaan deegaanka beesha maalin-guur, iyagoona markii aad loo fah-faahiyay falalka argagixisnimo ee uu nabadiidku ku wiiqayo danaha iyo nolosha bulshada deegaanka dhan- walba oo laga eegaba gaar ahaan arinta foosha xun ee ku saabsan dhalin yarada beesha ee intay duufsadaan ay dabka ku gurayaan kana ganacsanayaan dhiigooda.
Waxay beeshu isla fahmeen iskuna af-garteen in si buuxda loola shaqeeyo Dawlada Dal iyo Dibadba iyadoona shirku uu soo saaray Baaqan hoosku cad.
1. Dhamaan Beesha Maalin-guur waxa ay si buuxda utaageersan tahay Dastuurka Qaranka ee Fadaraalka Itoobiya iyo kan Dawlada Deegaanka Soomaalida.
2. iyo Barnaamijka nabada iyo horumarka ee ay wado DDS, isla markaana ugu hanbal-yaynaya Mudane Cabdi Maxamud Cumar iyo xukumadiisa guushii doorashada iyagoona ilaahay uga baryay inuu u fududeeyo gudashada wajibaad- kiisa shaqo.
3. Beeshu waxay can-baaraynaysaa kuwa dabka galinaya Dalkooda iyo Dadkoodaba, Majaro- hababinayana da’yar teena iyagoo fulinaya dan iyo ujeedo shi-sheeye.
4. Waxay ugu baaqayaan dadka kasoo jeeda beesha ee ku nool daafaha aduunka inay bilaabaan ka qayb qaadashada nabada iyo horumarka deegaankooga beenta iyo hodida nabadiidkana ayna dhagaha ka furaystaan, si runta loo arkana in lasoo booqdo Dalka.
shirku wuxuu si loo dhan yahay udoortay gudiga horumarka iyo nabada beesha Maalin-guur
1. Sakariye Maxamad Cumar Ugaas – Gudoomiye
2. Maxamad Sh/ibrahaam Cadaw – Ku xigeeen
3. Sulub Cali Cabaas – Xoghaye
4. Suldaan Cabdi Maxamud Cumar – Arimaha-bulshada iyo wacyi galinta
5. Barkhadle Sh/maxamad Magan – Xidhiidhka Qurbo-joogta
6. Bashiir Cabdi Khaliif Arimaha – Nabad-galyada
7. Makhtal Xashi Xasan Xubin
8. Cabdi Axmad yuusuf Xubin
9. Xukun C/qani Xubin
10. Cabdi C/laahi Xasan Xubin
11. Wacadi Xasan Aar Xubin